မာန် (တောင်လုံးပြန်) ● ဆရာမင်းသစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၃) | MoeMaKa Burmese News & Media
မာန်။ ။ ဩော် …. ဘယ်နေ့မှာ ဘာစားမယ်ဆိုပြီး မီနူးဆွဲတာလားဆရာ။
မင်းသစ်။ ။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အဆောင်သာယာရေးကလည်း (Art center) လို့ခေါ်တယ်။ ဆိုရှယ်အန်ရီဒင်း အဆို စီကေးရှင်း၊ သဟာရနဲ့စာဖတ်အသင်းတဲ့၊ အဲဒီမှာလည်း စာအရမ်းဖတ် ဖြစ်တာပဲ။ ကိုယ့်အရင်ရှေ့ကလူတွေဖတ်ခဲ့တာတွေ ကြည့်ရတာ၊ ကျနော်လည်း လိုက်ဘရီကိုသွား ကြည့်တယ်။ ‘တွမ်တီဖတ်စ် စကျူရီ ခရက်တီကယ် အက်ဆေး’ ဆိုတဲ့စာအုပ်၊ နောက်ဖက်မှာက ငှားကြည့်ထားတဲ့သူတွေ အမည်စာရင်းပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကြည်လင်တဲ့၊ ရှာကြည့်တော့ ကြည် လင် ငှားငှားလှချည်လားပေါ့။
အဲဒါနဲ့ စာကြည့်တိုက်မှူးကို မေးကြည့်ရတယ်။ ကြည်လင်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားဟာ ဘယ်သူတုန်းပေါ့။ ဟာ …. မင်းကလည်း ကဗျာဆရာကြည်အောင်ပေါ့ကွာတဲ့။
မာန်။ ။ ဟော … ဇာတ်လမ်းစပြီ။ တယ်ဟုတ်ပါလားဆရာ။
မင်းသစ်။ ။အေးဗျာ၊ ကျနော်လည်း အဲဒီမှာလူလည်လုပ်ပြီးကြည်လင်ငှားခဲ့သမျှတွေ လိုက်ဖတ်တော့တာပဲ။ ဟဲ … ဟဲ … ဟုတ် တယ် မို့လား၊ပြီးတာပဲ။ ထားတော့ဗျာ၊ ဒါကတစ်ပိုင်း။ နေ့ခင်းကြတော့ အစားအသောက်ကျွေးတာတွေ ပြောပြဦးမယ်၊ နေ့ခင်းမှာကနေ့က မန္တလေးမုန့်တီဆိုပါတော့၊ မုန့်တီသုတ်၊ နောက်နေ့ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး၊ ချက်လည်း မချက်တတ်ပါဘူး။ မှာတာပဲရှိတာ။